I-DialogTech: I-Call Attribution ne-Conversion Analytics | Martech Zone
I-DialogTech: I-Call Attribution ne-Conversion Analytics
NgoLwesithathu, ngoMashi 30, 2016 NgoLwesithathu, ngoMashi 30, 2016 Douglas Karr
Ngaphambi kwama-Smartphones namadivayisi eselula, lapho ukumaketha kwedijithali bekungamaphesenti ayi-100 wedeskithophu, ukubonwa kwakulula. Umthengi uchofoze isikhangiso senkampani noma i-imeyili, wavakashela ikhasi lokufika, wagcwalisa ifomu ukuze ahole noma aqedele ukuthenga.
Abakhangisi bebengabopha lokho okuholayo noma okuthengiwe kumthombo wokukhangisa ofanele futhi balinganise ngokunembile imbuyiselo yemali esetshenzisiwe kuwo wonke umkhankaso nesiteshi. Bamane badinga ukubuyekeza konke okuthintwayo ukuthola inani lesiteshi ngasinye, futhi bangakhulisa umthelela wabo kumali engenayo ngokutshala imali kokusebenzayo nokuqeda okungasebenzi. I-CMO futhi ingavikela ngokuzethemba isabelomali sayo kwi-CEO ngokukhombisa umthelela wayo kumali engenayo.
Kepha ezweni lanamuhla elihamba phambili lapho abathengi abaningi beguqula ngokushaya, ukunikezwa kuyinselelo enkulu - hhayi kuphela ekunqumeni umthombo wekholi, kepha nakumphumela omphumela. Lezi zigidigidi zezingcingo zanyanga zonke zingaphandle kokubukwa kwamathuluzi amaningi wokumaketha, okudala imbobo enkulu emnyama kubathengisi bemininingwane yedatha yokumaketha kuncike ekufakazeleni i-ROI nokwenza ngcono ukukhiqizwa kwemali engenayo. Le datha emayelana nokuguqulwa ngocingo ilahleka unomphela. Le datha ingafaka:
Umthombo wokumaketha wocingo: Isiphi isiteshi seselula, sedijithali, noma esingaxhunyiwe ku-inthanethi esishayele ucingo - kufaka phakathi isikhangiso, umkhankaso, nokuseshwa kwamagama asemqoka - nanoma yimaphi amakhasi wewebhu nokuqukethwe kusayithi lakho oshayayo obuke ngaphambi nangemva kokushaya ucingo.
Imininingwane yocingo: Ubani ofonayo, inombolo yakhe yocingo, indawo akuyo, usuku nesikhathi socingo, nokuningi.
Uhlobo lwekholi: Yayiyini inhloso yalowo ofonayo - ngabe bekuyikholi yokuthengisa noma olunye uhlobo (ukwesekwa, i-HR, ukucela, ukubekwa eceleni, njll.)?
Umphumela wekholi nenani: Lapho ucingo luhanjiswe khona, ingxoxo iqhubeke isikhathi esingakanani, okwashiwo ocingweni, futhi uma ngabe ucingo luguqulwe lwaba yithuba lokuthengisa noma lokwenza imali (nosayizi noma inani lelo thuba).
Ukunikezwa kwamakholi wefoni kuyinselelo ecindezela kakhulu ebhekene nabathengisi abaqhutshwa idatha namuhla. Ngaphandle kwayo, abathengisi abakwazi ukukala ngokunembile i-ROI yokumaketha futhi basebenzise imali esetshenzisiwe yalokho okuhola phambili kanye nemali engenayo. Ngokwengeziwe, abathengisi abakwazi ukuvikela ngokuzethemba izabelomali ku-CEO. Ngamafuphi, umgodi omnyama ubeka amaqembu wokumaketha ngaphansi kwengcindezi eyengeziwe yokuvikela inani lawo futhi kubiza amakhasimende amabhizinisi.
“Izingcingo ezingenayo zingenye yezinkomba zokuthenga ezinamandla kunoma iluphi uhambo lwamakhasimende. I-DialogTech inika amandla amaqembu wokumaketha amabhizinisi nama-ejensi ukukhulisa imikhankaso yedijithali yezingcingo zamakhasimende zisebenzisa izixazululo ezifanayo ze-martech nezinqubo asebezisebenzisela ukuchofoza. ” - Irv Shapiro, CEO, I-DialogTech
I-DialogTech isebenza njengozakwethu wamasu kumabhizinisi angaphezu kwama-5,000, ama-ejensi, nezinkampani ezikhula ngokushesha kuzo zonke izimboni. Amakhasimende amanje afaka uBen & Jerry's, HomeFinder.com, Comfort Keepers, Terminix, enamacala amathathu okuphoqelela okusetshenziswa F5 Abezindaba, AmahhotelaCorp, Futhi Izikhungo Zokulala Zezitimela Zokulala.
Kusetshenziswa ukulandela ngomkhondo izingcingo okusebenzayo okunikelwe nokulandela ngomkhondo ukuguqulwa, abathengisi bangenza ngcono imikhankaso yokusesha ye-AdWords ne-Bing ukuze ishayele amakholi hhayi nje kuphela, kodwa amakhasimende amaningi nemali engenayo:
Sebenzisa ukulandelwa kwekholi elingukhiye wegama elingukhiye ukufakazela nokuthuthukisa i-ROI: Qonda kahle ukuthi imikhankaso yakho yokusesha ekhokhelwayo iqhuba kanjani izingcingo, bese ulungiselela amagama angukhiye, izikhangiso, amakhasi okufika, izindawo, nezinsuku / izikhathi eziqhuba izingcingo zamakhasimende eziningi (futhi ezihamba phambili).
Abafonayo Bomzila Basuselwa Kumininingwane Yokulandelela Amakholi: Sebenzisa idatha yokulandelela amakholi efakwe ngesikhathi socingo ukuhambisa ofonayo ngamunye ngokufanele, ukubayisa kumuntu ongcono kakhulu ukuba abaguqulele ekuthengisweni. Ubuchwepheshe bokwenza umzila wekholi bungahola abafonayo ngesikhathi sangempela ngokuya ngezinketho ezahlukahlukene, kufaka phakathi umthombo wokumaketha (amagama angukhiye, isikhangiso, nekhasi lokufika), isikhathi nosuku, indawo yofonayo, nokuningi.
Hlaziya izingxoxo zokuthuthukisa i-PPC: Sebenzisa ingxoxo analytics ubuchwepheshe ukubona ukuthi abafonayo bokusesha abakhokhelwayo basebenzise umsila wakho omude noma amanye amagama angukhiye, ukuthi bachaza kanjani amaphuzu abo obuhlungu nezixazululo abanentshisekelo kuzo, nokuningi. Ungalusebenzisa lolo lwazi ukuze unwebise noma uqondise kahle ukuqondiswa kwegama elingukhiye futhi wenze ukuthumela imiyalezo nokukhangisa kufinyeleleke kakhulu.
Ukubuka konke nge-DialogTech
Ipulatifomu ye-DialogTech ixazulula enye yezinselelo ezicindezela kakhulu ezweni lanamuhla elihamba phambili ngokususa imbobo emnyama yedatha yokusebenza kokumaketha kusuka kumakholi angenayo. Njengoba abathengisi bebhekene nengcindezi ekhulayo yokushayela hhayi ukuhola kuphela kepha imali engenayo, ipulatifomu ye-DialogTech inika amandla abathengisi idatha yokunikezwa kwezingcingo edingekayo ukuze batshale ngokuzethemba emikhankasweni eqhuba izingcingo, kanye nobuchwepheshe bokuguqula obudingekayo bokuguqula abafonayo babe ngamakhasimende. Ubuchwepheshe bokunikezwa kwezingcingo nobuguquli obakhelwe ngqo abathengisi abasebenzela izingcingo kunoma iyiphi indawo futhi abangasetshenziswa nge - noma bazimele ngokuphelele - esikhungweni sezingcingo sebhizinisi.
Idatha yesichasiso samakholi wokugcina: Okungaphezulu kokulandela ikholi. Okuwukuphela kwesixazululo esitshela abathengisi ukuthi imikhankaso yabo iqhuba kanjani izingcingo zamakhasimende, uma izingcingo ziguqulela ekuthengiseni, nokuthi kungani - kuvalwa iluphu phakathi kwedola elichithwe nedola elizuziwe.
Ubuchwepheshe bokuguqula izingcingo zesikhathi sangempela: Okuwukuphela kwesixazululo sabakhangisi bokulawula umzila nokwenza ngezifiso lonke ulwazi lwekholi ngesikhathi sangempela, ukuqinisekisa ukuthi ucingo ngalunye luxhunywe zisuka kumuntu ongcono kakhulu ukuziguqulela ukuthengisa.
I-DialogTech isanda kwethulwa UmthomboTrak ™ 3.0 - isisombululo sokuqala nesokulandela umkhondo esakhelwe ukuhlangabezana nedatha, ukufinyeleleka, ukuthembeka kanye nezidingo zokuqalisa kalula zezinkampani zeFortune 1000, izinhlangano ezinkulu zezindawo eziningi kanye nama-ejensi wokumaketha abasebenzisana nawo.
Ngaphezu kwe-SourceTrak 3.0, i-DialogTech yethule izixazululo ezilandelayo ngo-2015, yaqhubeka nokunika amandla i-Voice360 yayo® ipulatifomu:
SpamSentry ™ Spam Call Ukuvimbela: Okuwukuphela kwesixazululo embonini yokulandelela izingcingo esisebenzisa ubuchwepheshe obuguquguqukayo, bokufunda ngomshini obuyeka izingcingo ezikhohlisayo nezingadingeki ngaphambi kokuba zifinyelele ethimbeni lezentengiso lenkampani. Ugaxekile futhi kuvimbela idatha yocingo yogaxekile ukuthi ingaveli kufayela le- analytics abathengisi abathembele kuyo ukukala ukusebenza kwemikhankaso yokukhangisa ngamaselula. Izici ezibalulekile zifaka: Amanethiwekhi we-neural wokuzenzela, azivumelanisa nogaxekile omusha, nobuchwepheshe benkinobho yokucindezela. Funda kabanzi ku:
I-DialogTech Yokumaketha Kwamaselula: Isixazululo sokuqala nokuwukuphela kokumaketha kokulandela, ukulawula nokwandisa izingcingo zamakhasimende ezivela ekukhangiseni kweselula. Lesi sixazululo sinikeza nabathengisi okunembe kakhulu idatha yesichasiso sezinga eliyisihluthulelo ngezandiso zamakholi we-Google. Ngokuhambisana nesichasiso sekholi, amakhono angeziwe afaka phakathi: Ukuqhutshwa kwamakholi wokuqukethwe, Ukuqoshwa kwekholi yengxoxo kanye analytics, nokuhlanganiswa ukufaka ofonayo oqondene nomkhankaso analytics idatha ene-martech ne-adtech izicelo zokuthuthukisa ukusebenza komkhankaso.
I-LeadFlow ™ ye-Pay-Per-Call: Isihambisi sezingcingo esithuthuke kakhulu, isichasiso, kanye nesisombululo sokuphatha esakhelwe imikhankaso yokukhokha ngocingo. Ukuhola inika abathengisi abasebenzisana nabo nokusebenza ngokuphelele ukulawula ukuthi kuthunyelwa kuphi ukuhola kwefoni kusuka kuzo zonke iziteshi zokumaketha, izingcingo ezibalwa njengezihola ezifanele, nokunye okuningi.
Tags: shayela ama-analyticscall isichasisoukuguqulwa kwekholiumphumela wekholiinani lekholiidatha yocingoizibalo zokuguqulwaingxoxoumthombo wokumaketha wezingcingouhlobo lwekholi
Izinzuzo ezi-6 ze-Twitter Zokukhuthaza Umkhiqizo Wakho